Chikwata cheNetball chemaGems Chodadisa Nyika
Zimbabwe iyo yakabudirira nezuro kupinda muchikamu chechipiri chemutambo wemaoko cheNetball World Cup yakundwa nhasi neNew Zealand 79 kwa 36.
New Zealand yakambotora mukombe weWorld Cup uyu kaviri. Asi izvi hazvisi kumisa ruzhinji rweZimbabwe kupemberera kutamba kwechikwata chavo chinozivikanwa nekuti maGems ichi kupinda muchikamu chechipiri chine zvikwata gumi nezviviri.
Zimbabwe iri kutamba iri muGroup F nezvikwata zvinoti Australia, Northern Ireland, New Zealand, Malawi ne Barbados. Kunyangwe Zimbabwe yakundwa, Malawi yakunda Northen Ireland 47 kwa 43.
Rimwe gungano remakwikwi aya i Group G rine zvikwata zvinoti Jamaica, South Africa, Trinidad and Tobago, England, Uganda ne Scotland. Zvikwata zviviri zvinenge zviri pamusoro mumagroup maviri aya ndizvo zvichaenda kumasemi finals emakwikwi aya. Zimbabwe yakunda kaviri ikakundwawo kaviri kusvika parizvino kubva zvatanga makwikwi aya.
Asi zvichitevera kurohwa kwechikwata chenhabvu chemaWarriors kuEgypt, vanhu vakawanda munyika neavo vanga vasingazive kana kutevera mitambo yeNetball vave kuziva kuti kune chikwata chemitambo chinonzi maGems mushure mekunge chikwata ichi chaita mbiri mumakundano avo ekutanga eWorld Cup.
Vatambi vechikwata ichi vakaita saUrsula Ndlovu, Perpetua Sachikonye, Mercy Mukwadi, Joice Takaidza, Sharon Bwanali, Patricia Maoladi vaita mbiri munyika.
VaOliver Musongoro avo vanotsigira chikwata cheDynamos munhabvu vanoti vanga vachingonzwa kuti Gems,Gems vasingazive kuti chii chacho.
Muteveri wezvemitambo VaTatenda Makazhu vanoti vafadzwa zvikuru nezvakaitwa nemaGems vachiti ivo vane tarisiro yekuti vasikana ava vanouya nemukombe uyu.
Mutsigiri wechikwata ichi Muzvare Rebecca Mushunje vanoti vanga vasingatarisire kuti maGems angaiite mashiripiti akadai vachiti ikozvino vave kutotarisira zvakawanda.
Zvaitwa nemaGems izvi zvichataurwa nezvazvo kwemakore nemakore achatevera uyezve kuvatambi ava hazvikanwike muhupenyu hwavo.
Chirikunyanyofadza ndechekuti mbiri iyi yauya kubva mumaoko evanhukadzi avo vanga vachingosimudzira zita renyika mumitambo pasi rese kubvira muna 1980.
Mugore iroro chikwata chenyika chevanhukadzi chemutambo wehockey chakatora menduru yegoridhe mumakundano eZimbabwe ekutanga emaOlympic Games ayo akaitirwa kuMoscow.
Izvi zvakateverwa nemenduru nomwe dzakatorwa nemutuhwini Kirsty Coventry kumakwikwi e2004 ne 2008 Olympic Games.
Vasikana vemutambo wenhabvu vemaMighty Warriors havana kuda kusaririra ndokubudirirawo kuenda kumaOlympic Games a 2012, izvo zvatadzwa kuitwa nezvimwe zvikwata.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu VaLawrence Hwekwete vanoti zvaitwa ikozvino nemaGems zvinoratidza husiyano hwebudiriro hurikuitika mumitambo munyika.
Muongorori wezvemitambo VaTinashe Museti vanoti vanhukadzi varikudadisa munyaya dzemitambo uye vanoti vatambi ava ngavapihwe mari.
Asi mitambo yevanhukadzi haisi kuwana rutsigiro rwakasimba zvekuti maGems akazowana rubatsirwo rwemari vachema chema uyezve vatove pedyo nekuda kusimuka kubva muZimbabwe.
Asi hurumende yakatora nguva imwecheteyo kuumba komiti yekuunganidzira mari chikwata chenyika chenhabvu chemaWarriors icho chaienda kumakundano e 2019 Africa Cup of Nations.
Zvichiburikidza zvekare nekuti maMighty Warriors akatendwa nemadhora mashanu chete apo vakadzoka kubva kuma 2012 Olympic Games, mari yaive isingakwane kuti vamwe vavo vadzokere kudzimba dzavo.
Izvakauya mushure mekunge vaimbove gurukota rezvemitambo VaMakhosini Hlongwane vavimbisa vatambi ava kuti vachatendwa zvakasimba nehurumende izvo zvisina kuzoitika.
Vakawanda vanotevera mitambo vanoti panofanira kuve neshanduko mumabatirwo arikuitwa zvikwata zvenyika zvevanhukadzi VaMuseti vachiti vatambi vemaGems vanofanira kutendwa zvakasimba.
Parizvino, hapana shoko rati rabva kuhurumende nezvaitwa nechikwata ichi kunyange hazvo kune makurukota matatu evanhukadzi akaperekedza maGems kuLiverpool.
Asi vatambi ava vangangowana kutendwa kwakasimba nekuwana mabasa kuzvikwata zvekunze kwenyika izvo zvirikumakundano aya kuraura vatambi.
Botswana Yokurudzirwa Kupa Zvizvarwa zveZimbabwe Magwaro
America Inorangarira Kuwana Kwayo Kuzvitonga
Nyanzvi Dzoudza Zifa Gwara Rekutevedzera Kuitira Kuti Mitambo yeNhabvu Itambwe Munyika
Hurumende Yokurudzirwa Kuongorora Vanhu Vakawanda Munyika Chirwere cheCovid-19
Mutengo weChingwa Unodzikiswa Kuti Ufambidzane neMusika weMari yeKunze